Wasiirka Ganacsiga Soomaaliya Muuse Suudi ayaa dadka Muqdisho degan ugu baaqay in dowlada Talyaaniga ku banaanbaxaan
Buluugleey August 11, 2005
Wasiirka Ganacsiga Soomaaliya Muuse Suudi ayaa dadka reer Muqdisho ugu baaqay in ay dowlada Talyaaniga ku banaanbaxaan.
Mudane Musse oo u warramayey saxaafada ayaa dowlada Talyaaniga ku tilmaamay mid ka sii daran dowlada Itoobiyo oo ah cadowga umada Soomaaliyeed.
Mudane Muuse Suudi ayaa Talyaanigu ku tilmaamay mid hakinayo horumarka Soomaaliya, wuxuuna wasiirku hadallo ay caro kulul ka muuqato ku yiri, "dowlada Talyaaniga ayaa marnaba raali ka aheyn in dowlada Soomaliya iskeed u istaagto soona ceshato sharaftii Soomaalinimo ay caalamka ku laheyd". Wuxuu wasiirku ka codsay dowladaha caalamka in aynan waxba ugu soo dhiibin dowlada Talaayniga masuul ka nooqon dowladaha caalamka.
Mudane Suudi ayaa dowlada Talyaaniga ku tilmaamay mid sii hurinayso colaada ka aloosan labada garab ee dowlada KMG ah. Wuxuuna ka deeriyey xiriirka siyaasadeed ee labada wadan u dhaxeeya ee sii xumaanaya maalinba maalinta ka danbeysa. "Waxaana taa ugu wacan" , buu yiri Wasiirku, "Talyaanigu weli doonayo in Soomaaliya marnaba ka dhalan dowlad nidaamsan".
Haddabo, naceybkan iyo qalalaasaha ay dowlada Talyaanigu dalka Soomaaliya ka dhex wado ayaa la xiriira sunta niyuukeliyaarka iyo qashinka wershadaha ay ku duugto dalka Soomaaliya. Tasina waxay Talyaanigu ugu suurtoobeysaa iyada oo aan marnaba ka dhalan dowlad hanata nidaamka dalka.